Senior Accountant ( based in Kalaw, Shan State ), Hotel Busi ﻿
11.3.2019, Full time , Export / Import / Trading
We are looking for our Company operating Kalaw Heritage Hotel ( www.kalawheritagehotel.com )
a talented Senior Accountant leadingasmall team based in Kalaw, Shan State
•	To audit, process and prepare invoices for our clients.
ACCOUNT PAYABLE ပေးရန်တာဝန်ရှိစာရင်း
•	To audit, process and prepare expense analysis.
GENERAL CASHIER အထွေထွေငွေကိုင်
•	To Collect daily bank deposits and prepare daily accounting cash.
•	နေ့ စဉ်သိမ်းဆည်းရရှိသောငွေကို စုပေါင်းတင်ပြရန် ။
•	Collecting all business cash income and deposit to bank
•	၀င်ငွေအားလုံးကိုစစ်ဆေးစုစည်း၍ ဘဏ်သို့ သွင်းရန်။
•	Preparing daily cash flow including flowing cash changes.
•	နေ့ စဉ်ဝင်ငွေသုံးစွဲမှု့ နှင့် ၀င်ငွေအပြောင်းလဲကိုတင်ပြရန်။
•	Checking invoice and inventory account on daily basis.
•	အခြေခံအားဖြင့် နေ့ စဉ်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဘောင်ချာများကို စစ်ဆေးရန်။
•	Make the monthly depreciation report.
•	ပုံသေပစ္စည်းများ၏ တန်ဖိုးလျော့စာရင်းကို လစဉ်တိုင်းတင်ပြရန်။
•	Prepare the uniform budget in advance on monthly basis.
•	လစဉ်လျာထားအသုံးစာရိတ်နှင့် ကြိုသုံးစရိတ်ကို တင်ပြရန်။
•	Make the monthly interest report.
•	၀ယ်ယူပစ္စည်းများ၏ အတိုးစာရင်းကို လစဉ်တင်ပြရန်။
•	Check outstanding money in the bank and prepare daily cheques.
•	ဘဏ်မှထုတ်ယူငွေများကို နေ့ စဉ်ချက်လက်မှတ်ဖြင့်စစ်ဆေးတင်ပြရန်။
•	Summarize the monthly Expenses accounting report (Aging Account Payable).
•	ကုန်ကျစရိတ် တစ်လလုံးစာကို တင်ပြရန်။
•	To check Value Added Tax (Purchase) and Withholding Tax.
•	၀င်ငွေနှင့်ပတ်သက်သောအခွန်ခနှုန်းထားများကို စစ်ဆေးရန်။
•	Recording daily payment in Disbursement Book on monthly basis.
•	နေ့ စဉ်ထုတ်ပေးလိုက်သော ပိုက်ဆံများကို ငွေပေးချေခြင်းစာအုပ်တွင်မှတ်သားရန်။
•	Every month to check Accounts Payable Book.
•	လစဉ်လတိုင်း ပေးရန်ရှိစာရင်းကို စစ်ဆေးရန်။
•	Checking Inventory Book on monthly basis.
•	လတိုင်း ပေးလိုက်သောငွေနှင့် ကုန်ပစ္စည်းများကိုစစ်ဆေးရန်။
•	Recheck and verify all invoices.
•	လက်ခံရရှိသော ဘောင်ချာအားလုံးကို စီစစ်၍စစ်ဆေးရန်။
•	Double checks invoice with purchases orders and receipts.
•	မိမိမှာလိုက်သောပစ္စည်းအရေတွက်နှင့် လက်ခံရရှိသောအရေတွက်ကို ဘောင်ချာနှင့်တကွစစ်ဆေးရန်။
•	Maintains records for all disbursements as required per company controls.
•	ထုတ်ပေးလိုက်သော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်များအားလုံးကို စစ်ဆေးနိုင်ရန် မှတ်သားထားရမည်။
•	Be responsible for the high value of payment which should be registered in account book and cheques is prepared in advance and the signature of receiver and receipt are received.
•	ငွေပေးချေရာတွင်ပမာဏများသော ပေးရန်ရှိစာရင်းများကို ငွေလက်ခံရရှိသူ၏ လက်မှတ်၊ ဘောင်ချာ၊ချက်လက်မှတ် ပြည့်စုံစွာထားရန် တာဝန်ရှိသည်။
•	Collect and count (withawitness) all cash income from cash deposit box in daily basis.
•	နေ့ စဉ်စုစည်းရရှိသော ၀င်ငွေများအားလုံးကို သက်သေနှင့်တကွ အာမခံသေတ္တာထဲတွင်သိမ်းဆည်းရန်။
•	Receiving the record of daily General Cashier including deposit, cash received, credit card slip
•	နေ့ စဉ်ရရှိသောဝင်ငွေများကို (ကြိုတင်ရရှိသောငွေ ၊ အကြွေးကဒ်) စစ်ဆေး၍မှတ်သားရန်။
•	Prepare and make the daily bank deposit
•	ရရှိသောငွေများကို ဘဏ်သို့ သွင်းရန်။
•	Prepare General Cashier’s Daily Report.
•	နေ့ စဉ်ဝင်ငွေများကို တင်ပြရန်။
•	Provide all cashiers with required change, including extra change for long week-ends or special occasions.
•	ငွေကိုင်အတွက်လိုအပ်သောပြောင်းလဲမှု့ ကိုအခြေနေကာလကိုလိုက်၍ပေးရန် ။
•	Reimburse cashiers for any advanced payment that may occur
•	ကြိုတင်ရရှိသောငွေများကို လိုအပ်လျှင်ပြန်ထုတ်ပေးရန်။
•	Maintains all records as required by the Hotel.
•	ဟိုတယ်တွင်လိုအပ်သော ငွေစာရင်းအားလုံးကိုထိန်းသိမ်းရန်။
B.Com & related degree or Diploma in Accounting (LCCI,UK)
Minimum 3-4 years experience in related field
Haveaknowledge of Accounting Software
Prefer having experience in working hotel or F&B (Restaurant)
We offer Immediate vacancy
Meals, living & lodging will be provided
Willing to allocate in Kalaw, Shan State
Work location Kalaw Heritage Hotel
No3Quarter, University Raod
76 Days, Full time , Export / Import / Trading
80 Days, Full time , 500 000 - 700 000 Ks, Export / Import / Trading
80 Days, Full time , 200 000 - 300 000 Ks, Export / Import / Trading
hotel account leader AR AP Controlling Accountancy Jobs Accountancy Jobs Accountant Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Shan State 251 Days